Budata Internet Download Manager maka Windows
Free Budata maka Windows (14.21 MB)
Budata Internet Download Manager,
Gịnị bụ Nbudata Ntanetị Ntanetị?
Nbudata Ntanetị Ntanetị (IDM / IDMAN) bụ mmemme nbudata ngwa ngwa nke jikọtara na Chrome, Opera na ihe nchọgharị ndị ọzọ. Site na njikwa njikwa faịlụ a, ị nwere ike ịrụ ọrụ nbudata niile gụnyere nbudata ihe nkiri sitere na ịntanetị, nbudata faịlụ, nbudata egwu, nbudata vidiyo na YouTube. Nbudata Ntanetị Ntanetị, ihe nbudata faịlụ kachasị mma, na-abịa na ụdị ikpe 30 ụbọchị ma ị nwere ike iji atụmatụ niile maka oge ụfọdụ; Mgbe ahụ ịkwesịrị ịnweta nọmba Oghere Usoro ahụ ma kwalite na mbipute zuru ezu.
Nbudata Ntanetị Ntanetị bụ njikwa ihe nbudata faili dị ike nke na-enye gị ohere ibudata faịlụ na ịntanetị ruo ugboro 5 ngwa ngwa. IDM, nke enwere ike ijikọ ya na ihe nchọgharị ịntanetị niile a ma ama dị ka Firefox, Google Chrome, Opera na Internet Explorer, na-enyekwa gị ohere ịga nihu na nbudata ị na-agwụbeghị site na ebe ị kwụsịrị. Nwere ike ibudata ihe omume ahụ site na ịpị bọtịnụ bọtịnụ nke Nbudata Ntanetị Ntanetị.
Nbudata Nbudata Nbudata Ntanetị Nbudata, Nbudata IDM
Ninwe njikwa ọrụ dị ọcha ma dị mma nke ọma, IDMAN na-eme ka njikwa njikwa faịlụ niile dị mfe maka ndị ọrụ ekele maka bọtịnụ buru ibu ma dị mma. Site na nbudata ihe nbudata niile na folda dị iche iche dịka ụdị ha, mgbagwoju anya nke nwere ike ibili na-ezere ma nye usoro zuru ezu maka faịlụ ebudatara. Na mgbakwunye, ekele maka menu ntọala dị elu na mmemme ahụ, ịnwere ike ịme mgbanwe dị mkpa maka ụdị faịlụ dị iche iche na isi mmalite ntanetị.
Nbudata Ntanetị Ntanetị, nke nwere ike imelite onwe ya mgbe mmelite ọhụrụ wepụtara, na-enye ndị ọrụ ohere iji ụdị mmemme kachasị ọhụrụ.
Tụkwasị na nke a, ekele maka atụmatụ ndị dị ka nkwado ịdọrọ na dobe, onye nhazi ọrụ, nchedo nje, nnweta nbudata, nkwado HTTPS, usoro ntinye iwu, ụda, nyocha ZIP, sava zighachi akwụkwọ na nbudata na-aga nihu na IDM, ndị ọrụ nwere ike ịnwe ha niile ihe ha chọrọ na onye na - ebudata ha. ha nwere ike ịnwe njirimara.
Njikwa Ntanetị Ntanetị, nke m na-ezuteghị nsogbu ọ bụla noge ule m, na-eji usoro ihe ntanetị dị ala. O doro anya na anyị ga-ekwu na ọ dabere na nha faịlụ na ọsọ ọsọ.
Na mmechi, ọ bụrụ na ị chọrọ a ọkachamara omume na elu atụmatụ na i nwere ike iji budata gị faịlụ nelu internet, ị ga-hoo haa na-agbalị Internet Download Manager. Can nwere ike ibudata na Downloadntanetị Download Manager download bọtịnụ.
Etu esi eji Nbudata Ntanetị Intanet?
Enwere otutu uzo iji budata ihe nkiri, vidiyo, egwu, faịlị na Internetntanetị Download Manager (IDM):
IDM na-akpọ clicks na Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer 11, Opera na ihe nchọgharị ịntanetị ndị ọzọ. Usoro a kachasị mfe. Ọ bụrụ na ị pịa njikọ njikọ na Google Chrome ma ọ bụ ihe nchọgharị ọ bụla ọzọ, Njikwa Ntanetị Ntanetị ga-eweghari nbudata a ma mee ya ọsọ ọsọ. Nokwu a, ịkwesighi ịme ihe ọ bụla pụrụ iche, ị na-abanye na ịntanetị ka ị na-eme mgbe niile. IDM ga-eweghara nbudata na Google Chrome ma ọ bụrụ na ọ dabara na ụdị faịlụ / ndọtị. Ndepụta ụdị faịlụ / ndọtị iji budata na IDM nwere ike dezie ya na Nhọrọ - General. Ọ bụrụ na ị pịa Download Mgbe e mesịrị mgbe windo faịlụ nbudata ga-emepe, URL (adreesị weebụ) agbakwunyere na ndepụta nbudata, nbudata ahụ agaghị amalite. Ọ bụrụ na ịpị mmalite, IDM ga-amalite ibudata faịlụ ahụ ozugbo. NJ,-enye gị ohere na-akpakọrịta gị downloads na IDM edemede. IDM na-egosi edemede na ndabara ndekọ ndekọ dabere na ụdị faịlụ. Can nwere ike idezi ma ọ bụ hichapụ edemede na tinye ọhụrụ edemede ke isi IDM window. Nwere ike ịhụ ọdịnaya nke faịlụ abịakọrọ tupu ibudata site na ịpị bọtịnụ Preview. Ọ bụrụ na ijide CTRL ka ịpị njikọ njikọta na ihe nchọgharị ahụ, IDM ga-eweghara nbudata ọ bụla, ọ bụrụ na ijide ALT, IDM agaghị eweghara nbudata ahụ ma ghara ikwe ka ihe nchọgharị ahụ budata faịlụ ahụ. Ọ bụrụ n ịchọrọ IDM iweghara nbudata ọ bụla site na ihe nchọgharị ahụ, gbanyụọ mwepụ ihe nchọgharị na nhọrọ IDM. Echefukwala ịmalitegharị ihe nchọgharị ahụ mgbe ịgbanyụ ma ọ bụ na mwepụ ihe nchọgharị na Nhọrọ IDM - General.Ọ bụrụ na ịnwee nsogbu ibudata ya na Nbudata Ntanetị Ntanetị, pịa igodo ALT.
IDM na -elee mpempe akwụkwọ maka ezigbo URL (adreesị weebụ). IDM na-enyocha usoro ihe eji egwu egwu maka URL nwere ụdị ndọtị. Mgbe e depụtaghachiri adreesị weebụ na kiiboodu, IDM na-egosiputa dialog iji malite nbudata ahụ. Ọ bụrụ na ị pịa OK, IDM ga-amalite nbudata ahụ.
IDM na-abanye na nchịkọta nhọrọ nri nke nhọrọ IE (MSN, AOL, Avant) na ihe nchọgharị dabeere na Mozilla (Firefox, Netscape). Ọ bụrụ na ị pịa aka nri na njikọ ihe nchọgharị ahụ, ị ​​ga-ahụ Nbudata na IDM. Nwere ike ibudata njikọ niile na ederede ahọpụtara ma ọ bụ otu njikọ sitere na ibe HTML. Usoro a nke ibudata faịlụ bara uru ma ọ bụrụ na IDM anaghị akpaghị aka na nbudata. Naanị họrọ nhọrọ a iji malite ibudata njikọ na IDM.
Nwere ike iji aka tinye URL (adreesị weebụ) na bọtịnụ Add ​​URL. Nwere ike ịgbakwunye faịlụ ọhụrụ maka nbudata na Tinye URL. Nwere ike tinye URL ọhụrụ na igbe ederede ma ọ bụ họrọ otu site na ndị dị. I nwekwara ike ezipụta ozi nbanye site na ịlele Jiri ikike igbe ma ọ bụrụ na ihe nkesa na-achọ ikike.
Dọrọ na dobe njikọ site na ihe nchọgharị na windo IDM ma ọ bụ ibudata ụgbọ. Ebumnuche dobe bụ windo na-enweta hyperlinks wetara na Internet Explorer, Opera ma ọ bụ ihe nchọgharị ndị ọzọ. Nwere ike ịdọrọ na dobe njikọ site na ihe nchọgharị gị na windo a iji malite nbudata gị na IDM.
Nwere ike ịmalite nbudata site na akara iwu site na iji ntinye akara iwu. Nwere ike ịmalite IDM site na usoro iwu site na iji usoro ndị a.
Internet Download Manager Ụdịdị
Nha faịlụ: 14.21 MB
Mmepụta: Tonec, Inc.
Kacha ọhụrụ na: 26-12-2021